काठमाडौं । फागुन ७ । किशोरावस्था पार गर्दै गरेका युवाहरूको प्रेमप्रतिको भावना समेट्दै नवप्रतिभा मिस्टर ओ.(ओमुक)ले आफ्नो पहिलो गीत सार्वजनिक गरेका छन्। म टोलाई.....म टोलाई...बोलको लोक पप शैलीको गीत उनले युट्युव मार्फत् फागुन ५ गतेदेखि सार्वजनिक गरेका हुन्। आदेश गुर्माछानको कम्पोजिसन रहेको गीतमा शब्द रचना र स्वर पनि गायक स्वयंको रहेको छ।
छायाँकार मेघावी शाक्य र मनिष श्रेष्ठले मोडलहरू सिद्धान्त कपाली, निशु शर्मा र विकास बर्तौलालाई दृश्यमा कैद गरेका छन्। भिडियो निर्देशनमा समेत कुशलता देखाएका गायक मिस्टर ओ.(ओमुक)ले संगीत क्षेत्रमै समर्पित रहने अठोटका साथ पहिलो गीत श्रोता, दर्शकमाझ प्रस्तुत गरेको बताए। गित हेर्न यहाँ क्लिीक गर्नुहोस ।